Yiyiphi iphepha lodonga lokukhetha ikhikhiti?
Indlu yasekhaya Uyilo lwangaphakathi
Umbuzo wokukhetha iphepha lodokethi ekhitshini namhlanje alunelanga njengeminyaka elishumi, kwiminyaka engamashumi amabini edlulileyo. Ikhitshi phantse kwindawo ehanjelwe rhoqo endlwini ngenxa yokulungiswa rhoqo kokutya, iindonga zihlambulukanga ngokukhawuleza kunokuba ziphi na ezinye iigumbi. Ngethuba lethu kukho iindidi ezininzi zezinto zokwakha, ngenxa yoko kunzima kakhulu ukukhetha kunoma yiphina iphepha lodonga, kwaye ngokwenene, ukuqinisekisa ukuba ikhulu leepesenti zokuchaneka kokukhetha.
Kodwa yonke imisebenzi, nokuba kunzima kakhulu, isisombululo, nangona kunjalo kunzima. Qinisekisa ukuba luhlobo luni lwephepha lodonga lokukhetha ikhikhini yakho, kusenokwenzeka ukuba ufanele ufikelele ngokufanelekileyo ngoku kukhetha! Qaphela ingqalelo ukuba ngaba iphepha lodonga liya kulungelelanisa ngaphakathi, kodwa nakwimgangatho, kufuneka uqwalasele iimpawu zekhishi lakho . Kwaye ukhethe njani iphepha lodonga? Kule siza kukunceda uqonde.
Yintoni usenayo ukuba ube iphepha lodonga?
Impendulo echanekileyo isondele kakhulu. Njengoko sele sithethile, iphepha lodonga kufuneka lihambelane nekhitshi, kodwa kufuneka banelise iimfuno ezithile.
Okokuqala kunye nephambili, iphepha lodonga kufuneka lixhomekeke kumswakama okanye kufumaneke kwi-steam. Iphephadonga elikhethiweyo kufuneka libe neengubo ezihlambulukileyo zamanzi. Ukubeka nje, kufuneka uhlaziywe. UVavvam kunye nenkcazo yokuqala xa ukhetha: iphephadonga kufuneka lihlaziywe, linganyaniseki kwimfucu, ioli okanye amanzi. Kwakhona, kufuneka ibe ngumphunga omile. Oku kuthetha ukuba iindonga apho isalathisi esisetyenzisiweyo kufuneka zomile ngokupheleleyo, kuba ukuhlanganiswa kokunyamezela okuqhubekayo kunokubangela ukubonakala kweengxaki ezifana nefungus.
Umqathango wesibini ukukhawuleza okulula. Oku kuthetha ukuba isambatho kufuneka ikhuselwe ekukhanyeni, kuba ikhitshi yenye yezona zinto zikhanya kakhulu! Imfuno yokugqibela yefowuni yekhitshini kukuba iyanqinela kwaye ixakeke. Emva koko, wonk 'ubani uyavuma ukuba kulula kakhulu ukulimaza ngephanyala iphepha kunye nejezi okanye iplagi. Iphepha lodonga kwaye liya kuma.
Iintlobo zephepha lodonga zekhitshini
Kubonakala ukuba iimfuneko eziphambili zobunqununu sele zenziwe: iifotshane kufuneka zibe zikhulu, i-steam kwaye ingabi namanzi kwaye ingabonakali. Ngoko, njani ukhetha ukulungiswa okuyimfuneko? Kukho nolwandle lwamanyathelo:
Iphephadonga elenziwe ngeempahla kunye nemithi, oko kukuthi kwizinto zendalo. Baya kuba namandla, kunye nobume bendalo, kwaye bayasebenza. Ukongeza kwintengo ephezulu lolu hlobo lwephepha lodonga alinalo ukusilela. Ixabiso, masithethe ngokuthe tye, sibize kakuhle. Yingakho bonke abantu bengakwazi ukuthenga iphepha lodonga.
Iphepha lodonga. Le duplex, oko kukuthi, iphepha lodonga elincinane, elinomphetho we-latex. Ziyakulungeleka ekhitshini, ngenxa yokuba zinyanzele, kwaye akudingeki ukuba uhlambe iindonga kaninzi. Lona luhlobo olusisisisitshi sephepha lodonga.
Iphephadonga elidumile kakhulu lokuba ungapenda. Zine-non-woven okanye i-paper base, kwaye uluhlu lwazo oluphezulu luyenziwe nge-vinyl ene-foam. Ziyakwazi ukulungiswa ngamaxesha amaninzi, kulula ukuhlamba kwaye zinobunzima obuphezulu.
Iphephadonga ngokushicilelwa kwesikrini. Olu hlobo lwephepha lodonga lunomqolo ophezulu wezingcingo. Abayitshisi, bayagcina umbala ixesha elide, bahlala bomelele. Khangela i-chic!
Amaphepha e-Wall-paper vinyl, anemiqolo emi-2, kunye nephepha lodonga yokupenda. Bahluke kuphela kuba banomdwebo olungeleyo. Iindleko zabo azibizi kakhulu.
Abamangalisi babo banemifanekiso yamaphephadonga, nangona bengathandwa kakhulu. Kodwa ukuba ugqiba ukuthenga imifanekiso yamaphephadonga, uze ufike kuyo yonke inxaxheba. Khumbula ukuba amaphepha edonga afanelekile ekhishini elibanzi, ngaphandle kwemibala eyahlukileyo kunye nefenitshala eninzi.
Le ndlela entsha yokuyila ingaphakathi, njengemifanekiso yephepha lodongo yaphakanyiswa ngabaculi baseFransi. Zathengiswa zizalisekile ngemifanekiso, ongayibamba amabala.
Yintoni abayilwayo bethetha ngale nto?
Kufuneka uhlale unika ingqalelo kwiingcebiso zabaqulunqi. Bacebisa ntoni? Yiyiphi imbala kunye neepatheni ezicetyiswayo kwiphepha lodonga?
Kwimizuzu emininzi, iphepha lodonga elihlala lihlazileyo lihlala lihamba. Ziyi-laconic kwaye zingabonakali, zivumela ukuba kugxininise ifenitshala, izesekeli zangaphambili, ukuzonwabisa. Iphepha lodonga - le mvelaphi enhle kumakhethini amahle, ifenitshala kunye nezinye iintambo zekhitshi.
I-monochrome kunye nekhredithi edibeneyo. Ungathenga iphepha lodonga ngeempendulo ezikhethiweyo. Olu khetho lufanelekile kwikhiyini ngefenitshala elula kwaye kuya kunceda ukwahlula kwigumbi ngokungathi kwiindawo. Into eyona nto kukuba iphepha lodonga kunye neepateni kunye neempendulo eziqhakazileyo zikwongezwa nje, kungekhona isiseko. Sekunqweneleka ukhetho lwamaphepha afanayo olufanayo kumgangatho okanye omnye kunye nomenzi ofanayo.
Kukho uhlobo lwephepha lodonga olulingisayo, umzekelo, u-bamboo, ukhuni, iileyili ze-ceramic. Ezi ntengiso zihlala zihlonishwa kakhulu, into ephambili kukusebenzisa kwaye ngokuchanekileyo ubazise kwi-design yangaphakathi. Ngoncedo lwabo, unokufumana impembelelo emangalisayo, kunye nokugcina kwizinto eziphathekayo.
Iphepha lodonga kwikhitshini yiklasi eliqhelekileyo. Ukuba zenziwa kwisitayela semifanekiso yokuphila, zize zifezeke ekhitshini kwisitayela seklasi. Ikhishi kwindlela yokuhlala kwidolophana, iphepha lodonga kunye ne-pastoral motifs lifanelekileyo. Kuba ikhikhati kwisitayela seFrentshi ibhasti iya kufana nephepha lodonga, elibonisa ubhontshisi bekhofi okanye iikomityi. Ukuba ufuna ukusebenzisa imifanekiso, kodwa awukwazi ukuthenga iphepha lodonga lolu hlobo nangaliphi na isizathu, sebenzisa umda ngomfanekiso. Abaqulunqi abacebisi ukuba basebenzise kakhulu imifanekiso. Ingqungquthela enjalo inciphisa indawo yekhitshi, engenakwenzeka ukuba uyayithanda!
Ukuba ufika kukhetho olufanelekileyo lwephepha lodonga, uya kukwazi ukutshintsha ingaphakathi kwikhikhini yakho ukuze ungabi nakwazi! Qaphela, landela iingcebiso zeengcali, kwaye awuyi kucinga! Emva koko, induduzo kunye nobuhle bekhitshi yakho kuxhomekeke kwikhetri ekhethiweyo.
Khumbula ukuba awukwazi ukukhawuleza ukuthenga iphepha lokuqala eliyithandayo. Hamba ukuthenga, ubuyekeze zonke iinketho uze ukhethe okufanelekileyo kakhulu. Zama ukukhetha iphepha lodonga, ukuze bakhonze ixesha elide kwaye benza ngokufanelekileyo.
Iphepha lodonga lokulala kwabantwana
Zobumba okanye i-porcelain? Sixhobisa ukuhlamba
Idibaniso elifanelekileyo lemibala ngaphakathi
Izindwangu zekhitshini: imithetho yokhetho kwaye wenze oko ngokwakho
Ukutya okuncedo kakhulu
Ingqungquthela phantsi kweengubo zoboya
Jongana neemaski kwi-oatmeal
Indlela yokudibanisa igama lesiNgesi
Indlela yokwenza isimangalo kumthandi wakho?
Ukujongana nokukhwabanisa ubuso
Indlela yokukhangela imali kunye nenhlanhla ngoFeng Shui?
Uthetha ntoni okwesibhakabhaka?
Indlela yokucoca ulusu lobuso ekhaya
ULana Del Rey: ifoto kunye nebali lokuvela kweenkwenkwezi
Ukunyaniseka kweekati kunye neenja, iimpawu kunye nokukhusela
I-Lipstick: itekisi yokuqhathanisa esuka eRoskontrol
Ukutya ngenxa yomshurensi ophezulu